HALKAAN KA AKHRISO W.W MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER 13-FEB-2020
Thursday February 13, 2020 - 09:13:15 in Wararka by Mogadishu Times
Sidee Villa Somaliya uga hadashay kul ankii Farmaajo iyo Biixi? Md.Cabdinuur M.Axmed Agaasimaha war faafinta Madaxtooyada Soomaaliya Mad axtooyada Soomaaliya ayaa ka hadalay ku lan ay Dorraad Addis Ababa ku yeesheen Madaxweyne Farmaajo iyo ma
Sidee Villa Somaliya uga hadashay kul ankii Farmaajo iyo Biixi? Md.Cabdinuur M.Axmed Agaasimaha war faafinta Madaxtooyada Soomaaliya Mad axtooyada Soomaaliya ayaa ka hadalay ku lan ay Dorraad Addis Ababa ku yeesheen Madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyna ha Somallilnad Muuse Biixi. Bayaan kooban oo bartii sa Facebook-ga ku qoray Agaasimaha Warfaafinta Madaxtootada Soo maaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayuu ku sheegay in Farmaajo iyo Muuse Biixi ku kulmeen Addis Ababa. Sidoo kale Agaasime Cabdinuur ayaa u ga mahad celiyey R/Wasaaraha Itoobiya Abi ya Ahmed martigalinta kulanka Farmaajo iyo Biixi. Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooya da Soomaaliya, ma uusan sheegin, wixii loo ga hadlay kulnakii Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi. "Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federa alka Soomaaliya Md.Maxamed C/hi Farmaa jo ayaa kulan kula yeeshay Addis Ababa Ma daxweynaha Somaliland Md.Muuse Biixi Ca bdi. DFS waxay uga mahad celinaysaa Ra'I isul Wasaaraha J/F/Dimuqraadiga Itoobiya Md.Abiy Axmed Cali marti-gelinta kulankii Dorraad" ayuu ku yiri qoraal, Cabdinuur. Kulankii Addis Ababa ee Farmaajo iyo Bii xi,wuxuu ahaa mid horey loo ogaaday, balse aan ilaa iyo hadda la garanayn wax looga ha dlay. Dhanka kale Madaxweynaha Soomaali ya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Shalay dib ugu soo laabtay Muqdisho, isa goo aan wax war ah siin Warbaahinta.
Farmaajo oo kormeeray ciidanka, kana hadlay arrin la-yaab ku noqotay
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ka soo saartay diiwaan gelinta ciidamada qalab ka sida ee Soomaaliya oo ay sheegeen in la soo gaba-gabeeyey. Madaxweynaha Soo maaliya Maxamed C/hi Farmaajo oo ay wehl iyeen guddiga loo xil saaray diiwaan gelinta ciidamada ayaa kormeeray xarunta uu ku shaqeynayey guddigaas, halkaas oo lagu soo bandhigay xogta ciidamada qalabka si da ee la diiwaan geliyey.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahad celiyey guddiga howshan qabtay ee uu hogg aaminayey Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Madaxweynaha JFS.Md.Maxamed C/hi Farmaajo oo Shalay dalka dib ugu soo laab tay ayaa kormeeray Xarunta Tirakoobka Ci idanka Qalabka Sida oo lagu soo gabo-gabe eyey howlihii la xiriiray ururinta xogta iyo diy aarinta diiwaanka Ciidanka. Madaxweynaha ayaa soo bandhigay muhii madda ay leedahay dib u habaynta Ciidanka Qalabka Sida oo aas-aas u ah dowladnima da dalkeenna iyo in guul deg-deg ah laga ga aro dagaalka lagaga sifaynayo dalka argagi xisada.
"Layaab waxaa igu noqotay, markii aan ta gay Wasaaradda Gaashaandhigga inaysan Ciidanku lahayn gal-xogeed (File) xitaa Sar aakiishii iyo Taliyeyaashii, taas ayaa noqo tay tallaabadii ugu muhiimsanayd ee aan ku saxayno hannaanka dib u dhiska Ciidanka Soomaaliyeed.”
Madaxweynaha oo loo soo bandhigay tu smooyin ka mid ah Diiwaanka Xogta Ciidan ka ayaa daalacday gal-anshaxeedka, aqoon ta, xaqsiinta iyo hannaanka dallacsiinta ciid anka. Madaxweynaha JFS ayaa uga mah ad-celiyey guddiga howshan qabtay ee uu hoggaaminayey R/Wasaaraha XFS Md. Xas an Cali Khayre.
Guddigaas oo ka kooban Wasaaradda Gaashaandhigga, Talisyada kala duwan ee Ciidanka Qalabka Sida, Wasaaradda Maaliy adda, khubaro iyo la taliyeyaal ka tirsan xaf iiska Madaxweynaha iyo Raiisul Wasaaraha.
Md.Cabdinaasir Seeraar Maax oo horey u sheegtay inuu yahay Madaxweynaha Jubbal and ayaa ka hadlay iska horimaadkii Shalay ka dhacay M/Kismaayo ee G/Jubbada Ho ose. Md. Seeraar, Afhayeenkii hore ee Ma amulka Jubbaland ayaa ku doodaya in lagu soo weeraray hoyga uu ka degan yahay Xar unta G/J/Hoose ee M/Kismaayo.
"Shalay waxaa dhacay rabshad,rabsha daasuna waxaa weeye mid anaga nalagu sa meeyay oo nalagu bilaabay, waad ogeyd me eshaan si nabadgelyo ah baa lagu joogay. Dad shacab ah oo isu deyaayay inay daree nkooda muujiyaan oo nooc mudaaharaad ay sameeyaan ayay ahayd, xilli bandow ah. Xaafadii aan anigu ka deganaa magaaladaa la’igu soo weeraray oo dagaal la’igu sameey ay. Waxaa i soo weeraray waa Axmed Mado obe ciidankiisii.” Ayuu yiri Cabdinaasir Seer aar Maax.
Isagoo la hadlayay BBC ayuu yiri "Weer arkan muddaba wuu iska socday, ninkani wa xaa weeye hawshan beryahaanba wuu wad ay, anaguna waan ogayn.
Dulqaadkaa iga dhammaaday nimankan magaalada waan ka saarayaa, sheekooyin kan beryahaan oo dhanba wuu waday, wuu maqnaa, wuuna yimid. Habeen horuu isugu yeeray Saraakiisha ciidankiisa wuxuu yiri nimankan magaalada joogga waa in laga bixiyaa.”
Su’aal ahayd sida uu dagaalku ku bilow day ayaa wuxuu ku jawaabay "Dagaalku wu xuu ku bilowday daan-daansi baa nalagu sa meeyay. Anaga xaafadaha aan deganahay oo amnigoodu uu fiicnaa, dadka waad ogtahayoo dhaqdhaqaaq baa jira, ciidan baa nagu soo dhawaadoo anaga xabado nagu furay.”
Ka dib maxaa dhacay oo la weydiiyay ay uu yiri "Wixii dhalinyarada markaa hayeen xabado waala riday, dee meesha ciidan baa joogay, nin qori wato ninka kale wuu ku rida yaa.”
Md.Cabdinaasir Seeraar ayaa ku andaco onaya inay iyagu doonayan doorasho ka dhacdo Jubbaland, isla-markaana ay ku taa gan yihiin waddada ah sidii doorasho loo qa ban lahaa, hase ahaatee waxaa uu Axmed Madoobe ku eedeeyay inuu abaabulayo dag aal, uu ujeedkiisu yahay in doorashada lagu fashiliyo.
"Doorasho halkaan kama dhicin doora shadaa rabnay inaan ka shaqayno oo ay dhacdo, tii baana anagu ku taaganahay. Ax med Madoobe wuxuu ka shaqaynayaa oo qabiil uu u abaabulayaa inuu dadka isu laa yo oo barnaamijkan uu ka hortaggo.” Ayuu yiri Cabdinaasir Seeraar.
Waxa uu intaa ku daray "Anaga hadda nin noo dowladeen karo ma jiro, axsaanka iyo wanaagga haddii uu wax tari waayo, an agu qaabka kale ee loo tacaamulo waan naq aanaa.”
Mar uu ka hadlayay sida uu iska horima adku ku joogsaday ayuu ku jawaabay "Xaba dii hadda waa joogsatay, anaguna inay joo gsato waan ka shaqaynay, koley dad ku dhe x jiro oo odayaala waa jiraan, xabadda iyo dagaalkaas inuu sii socdo ma rabno oo khasaaruhu bato ma doonayno.”
Isagoo ka jawaabaya khasaaraha ka dhashay iska horimaadkaasi ayuu yiri "Weli ma qiimayn karno khasaaraha iyo qaabkey wax u dhaceen, ma qiimayn karayo hadda.”
Iska horimaadkan ka dhacay Magaalada Ki smaayo oo u dhaxeeyay Ciidamada Jubbal and iyo maleeshiyaad u daacad ah Seeraar ayaa ka dhacay xaafadda Farjano, mana jir in qaybo ka mid ah magaalada oo uu ku sii fiday.
Shir looga hadlayay Arrimo muhiim ah oo ka furmay Baladweyne
Wasiirka qorsheynta Iskaashiga Caala miga ah ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle Guuleed Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macalin ayaa Shalay M/Beledweyne ka furay Shir lo oga hadlayay Soo bandhigida Baahiyaha ka jira Hirshabelle.
Kulanka waxaa ka qeyb galay Xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Hirshabelle, Hey ’ado ka socda Midowga Yurub, iyo Xubno ka socday Wasaaradda Qorsheynta Federaalka Soomaaliya. Wasiirada Beeraha,kaluumey siga,Haweenka,Xanaanada Xoolaha,Haweenka, ayaa soo bandhigay baahiyaha ka jira Hirshabelle, iyadoo la isla qiray muhiimada ay leedahay Dhisida iyo Ho rumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha, wa da shaqeynta Hey’adaha Caawiya Soomaa liya Iyo Hirshabelle iyo fulinta mashaariic de g deg oo la xiriira Horumarka iyo dib u dhiska.
Jubbaland oo ka hadashay iska horima adkii Shalay ka dhacay Kismaayo
Maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen iska hor imaadkii Shalay ka dhacay M/Kismaayo ee xarunta KMG ee maamul ka asi. Wasiirka warfaafinta Dowlad goboleed ka Jubbaland oo Shalay shir jaraa’id ku qa btay M/Kismaayo ayaa sheegay in ciidan ka amniga Jubbaland ay fashiliyeen isku day ay D/Federaalku ku khal khal gelinayso nab adgelyada M/Kismaayo.
Eng Cabdi Xuseen Sh.Maxamed Wasiir ka warfaafinta D/G/Jubbaland ayaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay in ciidanka amniga Jubb aland ay dhabarka ka jabiyeen qorshe ay DF ugu talo gashay inay ku bur-buriso nabadge lyada M/Kismaayo, iyada oo adeegsanaysa kooxo hubaysan
Wasiirka ayaa sheegay in DF/Somaliya muddo lix bilood ah dhibaato ay ka daba wa do Jubbaland, balse Jubbaland arrintaasi ay san u dulqaadaneyn.
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay iska horimaadkan. Wararka qaar waxay sheegayan in 3 qof ay ku dhaawacantay oo 2 ka mida ay dumar yih iin, halka midka kalena uu yahay askari ka tir san Ciidamada Jubbaland, warar kalena wa xay sheegayan in hal qof uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacantay.
Duqa Muqdisho oo Casho sharaf sago otin ah u sameeyay Madax dhaqameed Soomaaliyeed
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa M/Muqdisho Md.Cumar Maxamuud Ma xamed (Cumar Filish) ayaa Habeen hore kulan ca sha sharaf sagootin ah u sameeyay Isi mada Soomaaliye ed ee ka socday dowlad goboleedka Puntland iyo dowlad deegaan ka Soomaalida kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa M/Muqdisho.
Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ro iyo Xildhibaano ka tirsan DFS, guddoomi ye ku-xigeennada maamulka gobolka Banaa dir, odoyaal dhaqameed, fannaaniin iyo qey baha bulshada rayidka.
Qaar kamid ah isimada oo goobta ka had lay ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliya uga mahadceliyay ma amuuska ay u sameeyeen muddadii ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho.
Duqa M/Muqdisho Md.Cumar Maxamu ud Maxamed (Cumar Filish) oo kulanka ka hadlay ayaa xusay in Muqdisho ay tahay Ca asimadda ummadda Soomaaliyeed.
"Magaalada Muqdisho waa magaalada ummadda Soomaaliyeed, qofkaste oo ku ha dla Afka Soomaaliga ayey magaaladiisa tah ay maadama ay tahay Caasimadda JF Soo maaliyeed, waxaana waajib ka saran yahay qofkasta oo muwaad in Soomaaliyeed ah inuu door ka qaato xo ojinta xasilooni dee da”ayuu yir duqa Muqdi sho. Farmaajo "Walaalkay Siciid Deni dhowr jeer ayaan Xamar ku casuumay oo aan ku iri walaalow ha na dulmarin..”
Madaxweynaha DFS Md.Maxamed C/hi Farmaajo ayaa waraysi uu siiyay telefishan ka Universal tv wuxuu ku sheegay inuu Muqdisho ku casuumay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Madaxweynaha oo la wa ydiiyay xiriirka iyo go’doominta uu ku hayo maamul gobole edyada Waxaa uu sheegay in aanu marna ogolaan doonin in dowladiisa loo adeegsado maamul goobleedyada
Madaxweyne Farmaajo waxaa kale oo wax laga waydiiyay amniga dalka, waxaana uu sheegay in muddo yar ku soo afjari doon aan waxa uu ugu yeeray cadowgan dadka dhibay.
Arrimaha doorashada iyo inuu musharax yahay doorashada soo socota ayaa ka mid ahaa Su’aalaha lagu waydiiyay waraysiga oo baxaya Habeenka khamiista 13 bishan Febraayo.
Xog laga bixiyey kulankii Axmed Mado obe, Yamamoto iyo Jeneral Townsend
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxa med Islaam ayaa Shalay M/Kismaayo ku qa abilay safiirka dowlada Maraykanka u qaabil san Soomaaliya danjire Donald Yamamoto iyo taliyaha howlgalka AFRICOM Gen. Ste phen J. Townsend.
Sida lagu sheegay qoraal kasooo baxay Jubaland, danjiraha iyo Axmed Madoobe ay aa waxa ay ka wada hadleen xaaladda ka taagan gobolka Gedo iyo "duulaanka garda rada ah ee dowlada fe deraalka ah ay ku qaa day deegaano nabdo on kuwaas oo tan iyo xiliga dowladu ay halk aas weerarka ku qaad ay ay ka jirtay xaalada adag.”
Qoraalka Jubaland ayaa intaas ku daray "Waxaa la isku raacay in dowladu ay halka as kala baxdo ciidamada ay gaysay kuwaas oo kala dhantaalay nidaamkii maamul ee hal kaas ka jiray sidoo kalana khalkhal amni daro ka abuuray gobolka Gedo.”
Jubaland ayaa sidoo kale sheegtay in Ax med Madoobe iyo wafdiga Mareykanka ay ka wada-hadleen sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka Ju baland iyo dowlada federaalka ah, la iskuna raacay in ay muhiim tahay in xal laga gaaro khilaafkaas mudada ragaadiyay wada shaqa ynta dowlada federaalka ah iyo dowlad gobo leedyada dalka
Dhinaca kale kulan gaar ah oo dhex mar ay madaxweyne Axmed Madoobe iyo taliy aha howlgalka AFRICOM Gen. Stephen J. Towns end waxaa lagaga hadlay sidii loo bilaabi lahaa ho wlgal midaysan oo al-Sha baab lagaga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Jubaland. Howlgalkaas, ayaa sida la sheegay, wax aa si wadajir ah ay u fulinaya ciidamada dow lad goboleedka Jubaland, Ciidamada Xooga Dalka iyo Amisom oo ay tageerayaan ciida mada howlgalka AFRICOM ee Maraykanka.
Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho, weli war rasmi ah kama soo saarin socdaalka danjire Yamamoto ee Kismaayo. . Xigasho:Geesguud.com
Mareykanka oo dib u bilaabay taageera dii uu siin jiray Ciidanka Qaranka
Dowladda Mareykanka ayaa waxay xaq iijisay inay dib u bilowday toddobadkan qayb ka mid ah taageeradii, ay siin jirtay Ciida mada Dowladda Somaliya.
Qoraal ka soo baxay Safaaradda Mareyk anka ee Magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in Mareykanka dib u bilaabay bixin qayb ka mid ah kaalmadii tooska ahayd, ee uu ku caawinayay Ciidamada Dowladda.
Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in qaybta kaalmadan la siin doono guutooyin ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka, kuwooda Gobolka Shabellaha Hoose kula dagaala maya maleeshiyada Al Shabaab.
Mareykanka ayaa bishii December ee sa nadkii 2017 hakad geliyay dhaqaalihii uu siin jiray Ciidamada Qalabka Sida, ka dib markii uu sheegay in musuq maasuqa uu ka jiro tir adii Ciidamada Dowladda ee ku sugnaa Gobolada Shabellooyinka.
Hase ahaatee qoraalka Shalay ka soo bax ay Safaaradda Mareykanka ayaa lagu shee gay in Mareykanku uu kordhiyay hababka la xisaabtanka ee khayraadka deeq bixiye-yaa sha.Taliska Ciidanka Xoogga Dalka ee Go bolka Shabellaha Hoose ayaa soo dhawe eyay tallaabada uu Mareykanka dib ugu bil aabay bixinta qayb ka mid ah taageeradii tooska ah ayd ee Ciidanka Xoogga Dalka.
Puntland: Maamulka Farmaajo ayaa diiddan in a wada-hadlo
Dowladda Puntland ayaa ku eedaysay maamulka madaxweyne Farmaajo inuu dii day wada-hadal si loo xalliyo arrimaha ay ku muransan yihiin labada dhinac ee Puntland iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta Puntland Cali Xas san Axmed Sabareey oo Shalay Warbaahi nta kula hadlay caasimadda Garoowe ayaa sheegay in madaxweyne
Deni tan iyo markii uu xilka qabtay uu ku dhegganaa in laga wada-hadlo khilaafka
labada dhinac balse ay xukuumadda Federa alk mar kasta diiddaneyd wada-hadalka.
Wasiir Sabareey ayaa sheegay in madaxw eynaha Puntland Siciid
Cabdullaahi Deni uu mar walba golihiisa xukuumadda u she ego in loo hiilliyo Nida amka Federaalka ee Soomaali ku heshiis ay kaasi oo ay dagaal kula jirtodowladda madaxweyne Farmaajo.
Md. Sabareey ayaa ka digay in haddii khila afka labada dhinac uu sii socdo ay fursad u noqon karto kooxaha Argagixisada ah ee diiddan xasiloonida waddanka islamarkaana ay Beesha Caalamku ka niyad jebi karto Soomaaliya.”.
Duqa Muqdisho oo faah faahiyey qorsh aha Maqaamka Caasimadda
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxam ud Maxamed (Cumar Filish) oo Shalay ka hadlayay madal looga doodayay sidii Caasi madda u yelan laheyd maqaam gaar ah ay aa faah-faahiyay aragtida dadweynaha Caa dimadda.
"Magaalada Muqdisho waxaa kunool dad lagu qiyaasay in kabadan 3-Milaan oo qof ku waas oo aan laheyn matalaad siyaasi ah iyo maqaamka Caasimadda waxaana aragtida dadweynaha Muqdisho kamid ah in ay hel aan xaquuq lamid ah kuwa dowlad gobole edyada taas oo qeyb ka qaadan doonta dib-u dhiska Caadimadda iyo in magaaladu ay soo ceshato heybadii ay barisamaadkii ay Caalamka ku laheyd”.
Wasiirka wasaarada arimaha gudaha ee XFS mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxa uu ka hadlay muhiimada ay lee dahay maqa amka Muqdisho.
"Waa arin muhiim ah in doodan la qabto islamarkaana la xaliyo baahiyaha ay tabana yaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee reer Muqdisho waxaan uga mahadcelinayaa was aarada Dastuurka sida ay isaga xilsaareyso howlaha kusaabsan maqaamka Muqdisho”.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mud ane Saalax Axmed Jaamac oo furay kulan kani ayaa ka hadlay dib-u-eegista Dastuurka iyo kaalinta maqaamka Muqdisho.
" ujeedka Dib-u-eegista Dastuurka qaranka waa in ay noqotaa mid ay kuwada qanacsan yihiin umada Soomaaliyeed iyo in dood Cil miyeeysan oo dhaxalgal ah laga sameeyo maqaamka Caasimadda iyo helida mata alada siyaasiga ah ee muwaadiniinta Soo maaliyeed ee reer Muqdisho.
Golaha Aqalka Sare oo ansixiyay sharci muhiim ah
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ku yeeshay xarunta Aqalka Sare Kulankii 38aad ee Kalf adhiga 6aad iyada oo uu shir Guddomiyay Guddomiyaha Aqalka Sare Senatar Cabdi Xaaahi Cabdullahi.
Kulanka waxaa ku wehliyay Guddomiye Ku-xigeenka 1aad ee Aqalka Sare Senatar Abshir Maxamed Axmed iyo Guddomiye Ku-xigeenka 2aad ee Golaha Aqalka Sare ee BFS Senatar Mowliid Xuseen Guhaad.
Akhrinta 2aad ee Hindise-sharciyeedka Jaangoynta iyo Tayo-dhowrka Soomaal iyeed.
Guddomiye Ku-xigeenka Guddiga Dhaq aalaha, Maaliyadda, Ganacsiga, Warshada ha, Isgaarsiinta iyo Dalxiiska Senatar Deeqa Xasan Xuseen ayaa ka hor akhrisay Warbi xinta Akhrinta 2aad ee Hindise-sharciyeed kaan.
Intaa kadib ayaa laguda galay Su’aalo wa ydiinta Senatarada Golaha Aqalka Sare ee BFS ee Akhrinta 2aad ee Hindise-sharciy eedka Jaangoynta iyo Tayo-dhowrka Soom aaliyeed.
Sdioo kale Wasiirka Wasaaradda Ganac siga iyo Warshadaha ee XFS Mudane Eng. Cabdullaahi Cali Xasan oo ay wehliyaan Wa siiru Dowlaha iyo howl-wadeeno ayaa hor yimid Golaha Aqalka Sare.
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay Hind ise-sharciyeedka Jaangoynta iyo Tayo-dhowrka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Guddiga Dhaqaalaha, Maaliyadda, Ganacsiga, Warshadaha, Isga arsiinta iyo Dalxiiska Senatar Cabdi Axmed Dhuxulow ayaa Goalaha Aqalka Sare Akrinta 3aad ka hor akhriayay.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo War shadaha ee XFS Mudane Eng. Cabdullaahi Cali Xasan ayaa kamahad celiyey ansixinta sharcigaan. Waxaa Codeeyey 28 senatar, Cid ka a’amustay ama diiday majirin.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Puntland Cali Xasan Axmed (Sabareey) ay-aa sheegay in faragelinta dhinaca Maamulka ah oo ay ku heyso Dowladda Federaalka Puntland ay bilihii u dambeeysay aad isku soo tareysay taasina ay keeni karto in nidaamka dalka kajiro uu ka baxo.
Waxaa uu sheegay in puntland ay dhowr jeer isku dayday inay wada-hadal la gasho dowladda Federaalka si loo dhamee-yo mad madowga siyaasadeed,balse taasi ay ku guul dareysatay dowladda Soomaa-liya.
"Hadii aan la tixgelin dastuurka dalka dhibaato kale ayaa imaan karta dalka,wax-aana ugu baaqayaa madaxda sare ee dalka inay faragelinta ka daayaan Maamulka Pun-tland ayuu yiri”Wasiirka.
Marka laga soo tago hadalka Was-iirka Warfaafinta Puntland ayaa Wareysi uu bixiyey Madaxweynaha Soomaaliya uu ku sheegay in Madaxweynaha Puntland uu dh-owr mar wada-hadallo ugu yeeray balse uu fulin waayay.
Wafdi ka socda Dowladda oo Shir uga qeyb-galay Uganda &